fanafohezan-teny : fahavalo
Aza adino ny iaraho midinika ny Odessa National Maritime University
Ampiharo ny Odessa National Maritime University
Odessa dia fantatra amin'ny hoe "RANOMASINA Vavahadin'ny firenena". Ary misy vavahady dia natao hanokatra. Dia tanjona ao an-tsaina 80 taona lasa izay dia naorina "Vodniy Institute" – Transport Water Institute - indrindra indrindra an-dranomasina sy Odessa tahaka ny rehetra. Ankehitriny dia Odessa National Maritime University.
Odessa National Maritime University (ONMU) ny zavatra maro andrim-panjakana ny fanabeazana, izay manomana nahazo diplaoma rehetra educationalqualifying ambaratonga (Bachelor, Specialist, Master) fa feno fikarakarana ny mpiasa sy ny fepetra takiana ho an'ny dranomasina renirano sampana.
Ary dia naorina tamin'ny Jona, 12 1930 tahaka ny Odessa Institute of Water Fitaterana injeniera. Amin'ny Mey 1945 ny Institute no atao hoe ho Odessa Institute of Marine Fleet injeniera. In 1994 ny Institute dia nantsoin'Andriamanitra hoe tany an-Odessa State University Maritime.
-Pirenena sy iraisam-pirenena mandinika dikan'ny ny vokatry ny Anjerimanontolo ny asa sy ny anjara biriky manan-danja ho fampandrosoana ny fanabeazana sy ny siansa, ny University no nahazo tamin'ny sata-pirenena araka ny didin'ny ny Filohan'ny Ukraine Febroary, 26 2002.
Ny ONMU dia eo ambany mivantana subordination ny Ministeran'ny Fampianarana Science fasika any Ukraine, ary efa nahazo ny faha IV- (ny ambony indrindra) ambaratonga ny fankatoavana.
In 2003 vita soa aman-tsara ny ONMU ny fanamarinana ny kalitao iraisam-pirenena ny rafitra fitantanana ISO 9001: 2000.
Ny University dia mpikambana ao amin'ny Fikambanana Eoropeana ny Anjerimanontolo (RANO), Atsimo Atsinanana Eoropa Association de Transport fikarohana (SETREF), International Association ny Maritime University (IAMU), ary Magna Charta Universitatum. Ny ONMU no mpandrindra ny Oniversiten'i Network ny Eoropa Afovoany Initiative (CEI) in Ukraine.
Koa satria 1995 ONMU nandray anjara tamin'ny Trans-Eoropa Programs ny Fiaraha-miasa (TACІS -Tempus) ary CEI Programmes.
Odessa National Maritime dia nanofana University-dranomasina mpiasa ho an'ny orinasa ny firenena vahiny hatramin'ny 1950. Noho izany vanim-potoana nisy nanomana nahazo diplaoma ho 90 firenena ao Eoropa, Asia, Afrika sy Amerika Latina.
Ny rafitry ny University dia ahitana 7 fahaizanareo izay manomana manam-pahaizana manokana amin'ny 12 voatokana sy hanatanteraka retraining ny mpiasa.
Fidirana dingana in Odessa National Maritime University
Fa mihatra amin'ny Odessa National Maritime University mpianatra vahiny tsy maintsy mampihatra-tserasera Okrainiana fieken-keloka amin'ny alalan'ny Center.
Sambo INJENIORIA Faculty
Bachelor: “Fanamboaran-tsambo sy ny Ocean Technologies”, “Ranomasina sy River Fitaterana”, “Electromechanics”
Specialist: “Fiasan'ny Ship ny Power Zavamaniry”
Mpampianatra sy ny Specialist: “Sambo Power zavamaniry sy fitaovana”
mpianatra ny “Fiasan'ny Ship ny Power Zavamaniry” ary “Electromechanics” atao ihany koa ny hahazo ny Diploma Watch mpanamboatra ny fahatelo ho an'ny sehatra miasa an-tsambo.
Ny mombamomba azy ny nahazo diplaoma dia fitrandrahana ny sambo fahefana zavamaniry, fandaminana sy ny fitantanana ny sambo sy ny nanamboarany sambo fanorenana (trano), famokarana eo amin'ny orinasa ny fitaterana an-dranomasina, ara-teknika fikojakojana ny Fleet, fanamboarana ny sambo fitaovana, hery fanorenana ny sambo zavamaniry, rafitra sy ny hery vondrona (rafitra).
Faculty fitaterana TECHNOLOGIES sy ireo rafitra
Mpampianatra sy ny Specialist: “Transport Systems”, “Fitaterana sy Transport Logistics Management”
Ireo nahazo diplaoma tamin'ny Faculty afaka miasa toy ny stevedores sy dispatchers (fanaraha-maso manamboninahitra), famokarana injeniera (teknolojia) ary ny mpitantana ny entana fitaterana-be in-dranomasina seranana, mitodi-doha izy ireo dia afaka ny departemanta sy Services ny (Seagoing) Fandefasana, Agents, mpanakalo, Crewing sy Surveyor Companies. Koa izy ireo miasa eo amin'ny fikarohana siantifika sy famoronana-Foibe sy ao Maritime Engineering Fikambanana, in Maritime Solontenan'ny Agencies any Ukraine sy any ampitan-dranomasina, in State-kevi-pitantanana ny ny Ministeran'ny Fitaterana.
Faculty ny Toekarena sy ny mpitantana
Bachelor: “Toekarena ny Enterprise”, “Management”,
Mpampianatra sy ny Specialist: “Toekarena ny Enterprise”, “Fitantanana ny Fikambanana sy ny Administration”
Ireo nahazo diplaoma dia niofana ho an'ny ara-toekarena, ny fandaminana, ny fitantanana sy ny asa atao ao amin'ny Fandefasana Entana fikarohana Companies, Ranomasina ary Seranana River, Titanic, fanamboaran-tsambo Zavamaniry, in Departments ny Ranomasina sy River Fomba, ao amin'ny departemantan'i ny fifandirana-hanavotana sy ny Fleet manokana, in Broker ny, Agents sy Transport Expedition Companies, ao amin'ny fomba amam-panao samy hafa Control fikambanana ny ambaratonga (fitsipika), in Project, Fikarohana Siantifika sy Institiota, in Banks, in Economic Fikambanana, koa ao amin'ny fikambanana hafa maro ny Rano Fitaterana sy ny nifanila (mpiara-miasa) sampany rehetra ny fananana teny.
Faculty NY RANO-TRANSPORT SY talantalana fanorenana
Mpampianatra sy ny Specialist: “Hydrotechnical Construction”
Ireo nahazo diplaoma dia handeha hiasa eo amin'ny sehatra ny fanorenana seranana dranomasina, sambo fanandratako milina sy ny morontsiraka fanorenana seranan-tsambo (trano), hydrotechnical manokana fanorenana ho hainy ny kontinanta talantalana, fiarovana ny any amoron-tsiraka (Antananarivo, amoron-dranomasina) from mampidi-doza (mampidi-doza) manimba herin'ny onja in Administrative Departments ny Water Fomba, in Repair-namonjy fizarana sy ny departemanta ny Subwater Technical asa, in-dranomasina sy River Seranana, in Titanic sy ny fanamboaran-tsambo Zavamaniry, in Project ary Fikarohana Siantifika Fikambanana, in Educational orinasa.
Bachelor: “Fanamboaran-tsambo sy ny Ocean Technologies”, “Computer Sciences”
Mpampianatra sy ny Specialist: “Sambo sy ny Ranomasimbe Technologies”, “Fampahafantarana Management Systems sy Technologies”
Nahazo diplaoma avy amin'ny sampam-pianarana miasa ao amin'ny Titanic sy Shiprepair Enterprises, in Project nianaran-Bureau, Scientific fikarohana Fikambanana, Educational orinasa, Management Departments ny Waterways, koa in Detachments ny famonjena sy ny asa Shiplifting.
Fanabeazana asa eo amin'ny sampam-pianarana fahafaham-po ny fepetra takiana amin'ny firenena maoderina sy ny tsena iraisam-pirenena ny asa fitaterana sy ny fiovana voalaza ao amin'ny Okrainiana sy vahiny lalàna fa manan-kery amin'izao fotoana izao.
Mpampianatra sy ny Specialist: “Fanandratako sy ny Fitaterana, Road-trano, Construction, Melioration Machines sy fitaovana”
Injeniera-mechanicals niomana ity Faculty. Ny sehatra ny asa no antoka amin'ny avo-mamokatra asa transshipment (reloading) rafitra, ny fikarakarana, milina vaovao noforonin'ny fanorenana sy ny dingana transshipment teknolojia, efa mandroso miandalana ny fampidirana ny milina fomba asa, fananganana ny sarotra mechanization fenitra sy mamokatra ny dingana reloading automatization, fandaminana ny mpiasa sy ny fanofanana mpiasa fepetra fanampiny fampandrosoana.
Fiomanana Courses HO AN'NY mpianatra iraisam-pirenena
In 2006 ny ONMU nahazo ny fahazoan-dàlana ho fanomanana ny olom-pirenena vahiny ho an'ny fianarana ao amin'ny Oniversite an'i Ukraine.
Ny taridalana ho an'ny olom-pirenena vahiny no natsangana mba hanomanana azy ireo ho mahafehy ny siansa ara-teknika fitsipika. Ny lisitry ny nianatra foto-kevitra dia ahitana: Okrainiana sy ny Rosiana Languages, Matematika, Fizìka, Simia, sary, Computer Sciences
Ianao ve mila iaraho midinika ny Odessa National Maritime University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Odessa National Maritime University ao amin'ny Map
Odessa National Maritime University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Odessa National Maritime University.
Vinnytsia National University Medical Vinnitsa